किन अफ्रीकी बच्चाहरु रोना नहीं | Suenee Universe
किन अफ्रिकाका छोराछोरी रोएनन्
12 208206x 24। 05। 2013 1 रिडर
श्रेणी: आन्तरिक ब्रान्ड, स्वास्थ्य र जीवन शैली
म जन्मेको र केन्या र कोटे डी आइवरमा जन्मेका थिए। म पन्ध्र वर्षको लागि ब्रिटेनमा बस्छु। तर मलाई सधैं थाहा थियो कि म मेरो छोराछोरी (जब मैले गरेको छु) केन्यामा घर ल्याउन चाहन्छु। र हो, म मान्दिनँ कि म बच्चाहरु हुनेछु। म एक आधुनिक अफ्रिकी महिला हूँ जुन दुई विश्वविद्यालय डिप्लोमा, परिवार मा रोजगारी वाला महिलाहरुको चौथी पीढी - तर म एक साधारण अफ्रीकी महिला हूँ जब यो बच्चाहरु लाई आउँछ। हामी अझै पनि विश्वास छ कि तिनीहरू बिना हामी पूर्ण छैनन्; बच्चाहरू आशिष् हुन् कि अस्वीकार गर्न मूर्ख हुनेछ। यो सिर्फ कसैलाई आक्रमण गर्न लाग्दैन।
मलाई बेलायतमा गर्भवती भयो। घरमा जन्म दिन चाहने इच्छा धेरै शक्तिशाली थियो जुन मैले5महिनाको दौरान मेरो अभ्यास बेचेको थिएँ, एक नयाँ व्यवसाय स्थापित र सारियो। बेलायतमा गर्भवती आमाहरू जस्तै, मैले बच्चाहरु र माथि उठाउने किताबहरु पढेको छु। (पछि मेरो दादीले भनिन् कि बच्चाहरू पुस्तकहरू पढ्न नपाए र केवल के गर्न "के पढ्नु" आफ्नो बच्चा "पढ्न"।) मैले बारम्बार अफ्रिकी बच्चाहरूलाई युरोपेली भन्दा कम रोएकी पढें। म उत्सुक थियो किन।
जब म अफ्रिका फर्किएँ, मैले आमा र बच्चाहरूलाई हेरेँ। तिनीहरू सबै हप्ता भित्र सबै भन्दा कम थिए, तपाईं प्रायः घरमै थिए। मैले देखेको पहिलो कुरा थियो, उनीहरूको वरपरको बावजुद यो वास्तवमा केन्याई बच्चालाई "देख्न" साँच्चै निकै गाह्रो छ। तिनीहरू सामान्यतया अविश्वसनीय ढंगले उनीहरूका आमा (कहिलेकाहीं बुबा) भन्दा लिपिबद्ध हुन्छन्। यहां सम्म कि ठूलो जोडने वाला बच्चाहरु को एक ठूलो कंबल द्वारा मौसम देखि सुरक्षित गरिन्छ। तपाईं आफ्नो हात वा खुट्टा हेर्नको लागि भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईंको नाक वा आँखाको उल्लेख नगर्ने। प्याकेजिङ्ग गर्भको एक प्रकारको अनुकरण हो। शिशुहरु सचमुच को आसपास को दुनिया को तनाव मा घूर रहे हो उनि प्रवेश गर्दै छन्। मैले हेरेको अर्को कुरा सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो। बेलायतीमा, बच्चाहरू रोइरहेका थिए। केन्यामा, यो पुरा तरिकाले विपरीत थियो। बालबालिकालाई रोकाउने आशा छैन। जब तिनीहरू रुन्छन्, केहि चीज धेरै गलत हुनुपर्छ; यसलाई तुरुन्तै समाधान गर्न आवश्यक छ। मेरो अंग्रेजी भाभीले यसलाई यसरी संक्षेप गर्यो: "यहाँ मानिसहरु वास्तवमा बच्चाहरु को रोना सुन्न चाहदैनन्, है ना?"
जब मैले अन्तमा एक जना दाँतलाई गाँउबाट बाहिर आउँथे तब सबैले धेरै अर्थ बनायो। साँच्चै, मेरो बच्चा अत्यन्तै रोइरहेको थियो। गुस्सा र थकित, मैले कहिलेकाहीं सबै पढें र पढें तर मेरो दादीको लागि समाधान मात्र थियो: "निओनीनो" (केजी जी)। त्यो हरेक बीपको जवाफ थियो। कहिलेकाहीँ यो गीला डायपर थियो, वा मैले यसलाई राख्नु पर्ने वा चाँडै राख्नु पर्ने थियो, तर त्यो केवल उनको छातीमा हुन चाहन्न - चाहे त्यो खान्छ र केवल खुशी खोज्दैछ। म यो धेरै समय पहने र एक साथ सुत्नु भएको छ, त्यसैले यो हामीले मात्र गरेको एक प्राकृतिक विस्तार हो।
अन्तमा, मैले अफ्रिकाका बालबालिकाको आनन्दित कोठाको कुख्यात रहस्य बुझें। यो सन्तुष्ट आवश्यकताहरु को एक संयोजन थियो, जसको कुल को आवश्यकता को बिर्सने को आवश्यकता हो र यस क्षण मा के हुन्छ। नतिजा यो थियो कि मेरो बच्चा धेरै खाएको थियो; धेरै स्ट्राइक कार्यक्रमहरूले सिफारिश गरेको भन्दा कम से कम किताबहरु र कम से कम पाँच गुना बढी भन्दा धेरै भन्दा बढी।
चौथो महिनाको बारेमा, जब अधिकांश शहरी आमाहरूले सिफारिस गरी ठोस आहार पेश गर्न थाले, मेरो छोरी नवजात दृष्टिकोणमा फर्किए र हरेक घण्टा स्तनपान गर्न आग्रह गरे, जसले मलाई पूर्णतया शोक बनायो। विगत केहि महिनाहरु मा, खाना को समय मा धीरे-धीरे लम्बाई हुन्छ, मैले दूध टप नगरे बिना रोगहरु लाई लिन वा मेरो छोरीको नर्स रोक्न थाले कि मलाई पिउन चाहन्छु।
जो म गए गर्न समूह मा आमा को सबै भन्दा, म लगनशील भई पूरक छोराछोरीलाई भात र सबै विशेषज्ञहरु हाम्रो बच्चाहरु संग गर्न केही थियो जसले थियो - पनि डाक्टर र doulas, तिनीहरूले यो सबै सही थियो। आमाले पनि आराम गर्नुपर्छ। हामी प्रसन्न हुन्थ्यो कि हामीले एक प्रशंसात्मक प्रदर्शन गरेका छौं जब हामी विशेष गरी4चम्चनी मासु पुर्यायौ र हामीलाई आश्वासन दिई कि बच्चाहरु ठीक हुनेछन्। केही म अनिच्छा pawpaw मिश्रण गर्ने प्रयास (फल परंपरागत निहत्था मा केन्यामा प्रयोग) व्यक्त दूध संग र सही तापनि उनको छोरी को एक मिश्रण प्रस्ताव छैन, त्यो यो इन्कार गरे। त्यसैले मैले मेरो दादीलाई भनिन्। त्यो हँसिदै, मलाई सोधें कि यदि मैले किताबहरु पढें। त्यसपछि उनले मलाई बताए कि स्तनपान सबै तर सीधा छ। "उनले तपाईंलाई भन्नेछन् जब खाना र तिनको शरीर खानको लागि तयार छ।"
"त्यसो भए मैले के गर्नु पर्छ?" मैले उत्सुकतासाथ सोधें।
"के गरिसक्नुभएको छ, बकवास।"
त्यसैले मेरो जीवन फेरि सुस्त भयो। मेरो समकालीनहरूको धेरै अगाडि म जलपक्षी चामल खान्छन् र बिस्तारै अन्य खाद्य पदार्थ शुरू देखि देख्यो गर्दा, छोराछोरीलाई अब सुतेको म हरेक वा दुई घण्टा रात मेरो छोरी संग थियो, जगाए र बिरामीको गर्न दिन व्याख्या गर्ने काम मेरो फिर्ती संग यो योजनाको रूपमा पूर्ण रूपमा जाने छैन।
म चाँडै अरू अन्य शहरी आमाहरूको लागि अनौपचारिक परामर्श भयो। मेरो फोन नम्बर गर्न प्रेषित र म अक्सर, तपाईं बस खुवाइन्छ भने पनि "हो, बस उसलाई / उनको Breastfeed जारी गर्न।" हो फोन, जवाफ नै स्तनपान समयमा सुने। हो, हुनसक्छ आज तपाई आफ्नो पजमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। हो, तपाईं अझै घोडा जस्तो खाने र पिउन आवश्यक छ। होइन, म शायद तपाईं जान नहीं उठयो भने राम्रो समय, काम फर्कन हुन छैन "अनि अन्तमा, म एक आमा आश्वासन छ:"।। बिस्तारै यसलाई किनभने मलाई, सजिलो हुनेछ "पछिल्लो विवरण मेरो भाग बाट आशा अभिव्यक्ति थियो त्यो भन्ने त्यो क्षण मा यो कुनै सजिलो थिएन।
मेरो छोरी5महिना हुनुभन्दा एक हप्ताको बारेमा, हामी एक विवाहको लागि बेलायती गए र यसलाई आफन्त र मित्रहरुलाई पनि पेश गर्न पनि सकें। किनकी मेरो केहि कर्तव्यहरु थिए, मैले उनको खाने को योजना मा परेशान गरेन। धेरै अजनबीहरूको सबै शर्मनाक दृष्यको बावजूद, जब मैले मेरी छोरीलाई सार्वजनिक ठाउँहरूमा नुहाउँथे, मैले स्तनपानको लागि सार्वजनिक कोठाहरू प्रयोग गर्न सकेन किनभने तिनीहरू प्रायः शौचालयसँग जोडिएका थिए।
मानिसहरू जसलाई म विवाहको तालिकामा बसिरहेका थिए, "तपाईसँग खुसी छोरा हुनुहुन्थ्यो - तर उनी प्रायः धेरै पिउन थाले।" म चुस्त थियो। र अर्को महिलाले यसो भने: "तर मैले पढें कि अफ्रिकी बच्चाहरु धेरै रोइरहेका छैनन्।" म हँसिलो सहयोग गर्न सकेन।
मेरी दादीको बुद्धिमानी सल्लाह:
प्रत्येक समयमा बच्चालाई बेवास्ता गरौं, यदि तपाईंले भर्खरै उनीहरूलाई खुवाउनु भयो भने।
यसको साथ स्पाइ। प्रायजसो बच्चाले उठाउनुभन्दा पहिले आफ्नो छातीहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछ र यसले तिनलाई अझ छिटो सुत्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं रमाइलो हुनेछ।
तपाईंको हातमा पानीको बोतल सधैं पेय र पर्याप्त दूध छ।
स्तनपानले तपाईंको प्राथमिक कार्यलाई बुझ्दछ (विशेष गरी अचानक विकासको गतिमा) र तपाईका वरिपरिका व्यक्तिहरु लाई तपाईंको लागि यथासंभव गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तिनीहरू प्रतीक्षा गर्न सक्दैनन्।
तपाईको बच्चा पढ्नुहोस्, पुस्तकहरू होइन। स्तनपान गर्न सरल छैन - यो माथि र तल र कहिलेकाँही वृत्तहरूमा। तपाईंको बालबालिकाको आवश्यकता सबैभन्दा ठूलो विशेषज्ञ हो।
जे क्लेयर केनल
टैग: अफ्रीका, बचपन, दूध, बालबालिका, खाना, छातीहरू, गर्भावस्था, ग्रेट ब्रिटेन, महिला, जीवन
12 टिप्पणीहरू "किन अफ्रिकाका छोराछोरी रोएनन्"
मा 28.11.2017 11: 30
लेख पूर्णतया बेवास्ता गर्दछ "र केहि पनि छैन। - सिक्का नग्न छ। एक सामान्य यूरोपीय माम पनि बेच्छ र कुनै पनि "नायक" निष्कर्ष बनाउँदैन। यसबाहेक, एक नियमित युरोपेलीले बच्चालाई संक्रमण गर्न उसलाई चेतावनी दिन सहायक छैन। मैले बुझें कि यदि कसैले सेजियर सेक्शन मा जन्म दिए, त्यो दूध छैन, तर अझै पनि आमाबाबु को एक सानो प्रतिशत।
मा 29.11.2016 14: 45
कति आरामले आमालाई विश्वास गर्यो - भयानक।
आजकल मानिसहरू वास्तवमा आराम चाहिन्छ, तर बाकी सबैलाई चाहिन्छ जुन मानिसलाई चाहिन्छ एक मानसिक आराम हो - हाम्रो मस्तिष्क अतिभारित हुन्छ र आरामको आवश्यकता पर्दैन।
मा 21.01.2015 21: 13
मैले मेरी छोरीलाई वर्ष र एक पटक छाडेका थिए, तर कारणको कारणले मैले मेरो दूध छैन किनभने मलाई काम गर्न थालेको थियो। म इंग्ल्याण्डमा बस्छु र मेरो मातृभाषा छोड्न केवल एक बर्ष हो किनभने मैले2हप्ता जन्मेको सुरू गर्न थाले! यो प्रति रात सरल3x सन्दर्भ र स्तनपान र 6.00 मा बिहान काम गर्न जाने को लागी थिएन
खैर, मैले सोधे कि मैले सम्भावनाको दायरामा के गरिसक्यो
मा 20.01.2015 10: 27
म पनि एक छोरीलाई4वर्षमा डरलाग्दो चिसो छ। म मलाई "निर्भर" थियो कि एक सानो चिन्तित भए तापनि, तर म भन्न सक्छौं कि आज (यो 24let छ) यसलाई, स्वस्थ विश्वास छ, र जवान महिला आत्म छ र हामी एक धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। जसरी कसैलाई यहाँ लेखिएको छ ... ... निकटता को क्षण को, प्रेम ... यो सिर्फ अपरिहार्य छ। आज पनि, उनको छोरी, एक मुस्कानको साथ, उनी मेरो गोद र शर्ट भित्र कुनै पनि समय र जहाँ पनि उनले सोचे कि याद गरे। म धेरै शर्मीली हुँ, तर म कसरी आमाको स्तनमा भयानक तरिकामा मान्छे देख्न सकिन्छ भनेर देख्न सक्दैन। के यो "खुट्टा" को सबै भन्दा प्राकृतिक रूप हो किन त तपाईं यति कपडा व्यवहार गर्नुहुन्छ?
मा 20.01.2015 00: 20
त्यसैले मेरो लागि, सल्लाह - Koj - यस तथ्यको सम्बन्धमा कि बच्चा रोइरहेको छैन, बेकार थियो। थोरै एकै रमाईन्छ। त्यो स्तनपान देखि असक्षम भएको छ। बिस्तारै निगलियो, उनले धेरै हावा निगल गरे, एक संवेदनशील पेट थियो। त्यो स्तनपान पछि धेरै पटक सवारी गर्न सक्षम भयो (धेरै घण्टा पछि पनि)।
यसबाहेक, अनावश्यक र नयाँ दूधको मिश्रणले निश्चित रूपले उनको पेटलाई अधिक चोट पुर्याउनेछ, त्यसैले यो सल्लाह हरेकको लागि हुन सक्दैन।
मेरो लागि यो मजाक छ, किनकी कम रोना स्तनपान। यस तथ्यको बावजूद उनले स्तनपानको आवश्यकता थिएन र नयाँ आहारको बारेमा उत्साहित भयो। मैले पनि एक वर्षमा स्तनपान गर्न रोकिन भने, उनले परवाह गरेन कि उनीहरु :)
मा 18.01.2015 20: 28
मलाई आश्चर्य छ यदि3वर्ष मात्र नर्स वा फिड हुन्छ?
मा 18.01.2015 22: 53
लगभग आधे वर्ष तपाईको बच्चा प्लेट मा के हो जुन चासोमा छ। :) तर उसले उहाँलाई चाहना गर्छिन् जस्तो लाग्छ।
मा 16.01.2015 15: 38
म लेखमा मुस्कान गर्न थाल्नुभयो ... सेप्टेम्बरमा 2014 मैले मेरो तेस्रो बच्चालाई छोडें। तिनीहरू वर्षको लागि3थिए र किरगार्टन गए। दुई ठूला बच्चाहरू पनि तीन वर्षसम्म स्तनपान गर्दै छन्। हजुरआमाको सल्लाह सत्य हो, म भर्खरै मेरो अवलोकनहरू जोड्छु: यद्यपि हाम्रा सहकर्मीहरूले अनिवार्य टीकाकरण पछि पितृत्व वा उच्च तापमानको सामना गर्दछन्, हामीले प्रायः स्तनपानको "पीडा" गरेका छौं। मलाई लाग्छ दूध थिएन, तर सम्पर्क। अनि एउटा कुरा - मेरो जवानले मैले भयानक माइग्रेसनहरू सामना गरेको छु जसले न्युरोलोजीको उपचारलाई भेट्टाउन सकेन। गर्भावस्था र स्तनपानको बेला यो राम्रो थियो। त्यसैले - आफ्नो बच्चा पढ्नुहोस् र आफैलाई पढ्नुहोस्।
मा 29.01.2014 10: 52
नमस्ते Vando तपाईं साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ! प्रशंसा ....
र तपाईं कसरी यो गरौं जब तपाईंको छाती भत्किन्छ? अथवा उनले तिमीलाई चोट पुर्याए?
मा 29.11.2016 14: 43
छातीहरू खसाल्दै गर्दा उनीहरूलाई प्वाल पार्छ, तर तिनीहरू खसाल्छन् जब तिनीहरू पतन गर्दैनन् - होइन?
मा 29.11.2016 14: 49
बच्चा पनि रातमा नर्सिएको हुनुपर्छ किनभने यसमा 24 घडी चक्र छैन तर सानो चक्र छ। रातमा, उनी प्रायः उठ्छन्, र यसको विपरीत, तिनीहरू दिनभरि निस्किन्छन् - यो एक विकार छैन, तर केवल त्यो बच्चा एक ग्रहमा पुग्छ जुन धेरै छोटो दिन र रात हुनेछ।
पृथ्वी दिन र रात धेरै लामो छन्।
यदि आमाले राती राती स्तनपान गर्ने निर्णय गरेन भने - उनी आफैले हानि गर्छन् किनभने उनीसँग पीडित छाती छन् र बच्चा रातमा भोकाएको छ।
vanda karolyi भन्छन्:
मा 15.01.2014 18: 01
औंठी, औंठी, औंठी! ठ्याक्कै म र मेरो dcerou.kojila गर्नेछ गर्नुपर्छ रूपमा म प्रत्येक hodinu.bylo गरेको कहिलेकाहीं लत्तो, तर यति सुन्दर untimni क्षणमा let.do42 वर्ष, हामी साँच्चै हामीले पनि obe.divali धेरै आनन्द आँखा र usnuti.byla गरेको सुन्दर! प्रेम, कृतज्ञता र मेरो सानो छोरी को आँखा मा आदर सम्म कुराकानी, म कुनै पनि dospeleho.dnes मा देखेको कहिल्यै गर्नुभएको 8.a सबैभन्दा लगातार र nejsebevedomejsi dite जेक सबैलाई निन्दा मलाई znam.a छन्। odsuzovali.rikali आलोचना र म तपाईं आफ्नो बच्चाको आवश्यकता र अपरिचित लौरा थाहा थिएन को एक mindless बोली पालना गर्न भनेर थाह थियो र कति यो सिर्फ mamou.vubec बिरामी छैन संग हुन STEC stesti.jenom थियो थाहा थिएन blazen.a कि सधैं, हँसिलो विश्वास छ, स्थिर, र आमाहरु-मा chytra.takze तपाईंको हृदय भन्नेछु अर्थात् सधैंभरि अन्य अतिरिक्त कम प्रियतमा संग लिङ्क आफ्नो dite.je लागि राम्रो छ के को धेरै योग्य छ!
- यो साइट सही छ 135 प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन